Ukuskena iGenius kwe-iPhone kuhlaziywa kusetyenziswa isizukulwana esilandelayo se-AI | IPhone iindaba
UToni Cortés | | Iapps zokusebenza
Sonke siyazi (okanye kufuneka sazi) ukuba sinako jonga amaxwebhu natively ngekhamera ye-iPhone yethu kwisicelo «Amanqaku». Kungumsebenzi namhlanje obalulekileyo kwiselfowuni yethu kwaye ngokuqinisekileyo sisebenzisa ngaphezu kwesinye.
Kodwa yenye yemisebenzi yemveli ebandakanywa yi-iOS ngendlela esisiseko. Ndicinga ukuba oku kuvumela abaphuhlisi ukuba "bafumane umvuzo" ngokudala usetyenziso olupheleleyo ngakumbi ukwandisa loo msebenzi ukuze uhambelane nomsebenzisi. Enye yazo Iskena seGenius, Isixhobo esibalulekileyo ukuba ufuna ukuba yinyani nguJames Bond ngokukopa amaxwebhu.
Umphuhlisi wesicelo Iilebhu zeGrizzly usanda kukhupha uhlaziyo oluphambili kwi-app yayo eyaziwayo ye "Genius Scan" ye-iPhone kunye ne-iPad. Uthi basebenzise i-AI yobugcisa ekucoceni umfanekiso ogqityiweyo kunye nokwenza uxwebhu ngokuthembeka ngangoko kunokwenzeka kwiphepha lasekuqaleni.
Kukhuphelo lwayo lokushicilela, umenzi wesoftware walatha umahluko phakathi kwesicelo sokuskena esisiseko kunye nesinye njengeGenius Scan ebonelela ngeziphumo ezikumgangatho ophezulu ngokusekwe Isizukulwana esilandelayo sobukrelekrele bokufunda obunzulu bokufunda.
Ubuchule obutsha 'bokucoca' umfanekiso ovavanyiweyo
Ngokusekwe kwi «Ukufunda nzulu«, Isicelo sisebenzisa ii-algorithms ezintsha ngokupheleleyo ezonyusa umsebenzi wokufumanisa uxwebhu. Olu hlaziyo luthetha ukuba iGenius Scan ngoko nangoko igxile kumaxwebhu akho, nkqu nakwezona meko zinzima.
Ngoku kukho uhlengahlengiso olungcono lwemibala, ibhalansi emhlophe, izithunzi ezikhohlisayo ziyaqwalaselwa kwizikena zakho, kwaye imiphetho yamaxwebhu icociwe. Inkqubo ye- isihluzi sombala esitsha igcina imibala ngelixa igcina umahluko omkhulu kunye neethowuni ezimnyama ezimnyama ukwenza ukuba umbhalo ubonakale.
Iskena seGenius sihlalutya umxholo wexwebhu lakho kunye neepateni zokuthiya amagama amaxwebhu akhoyo ukubonisa iingcebiso ezifanelekileyo zokuthiya uxwebhu lwakho olutsha. Uxwebhu lwe-Smart oluthiya igama kwakhona ichonga owona mhla woxwebhu, endaweni yomhla wokuskena uxwebhu.
Kukho uguqulelo lweGenius Scan simahla kusuka kwi Ivenkile yosetyenziso ngokuthengwa kwexesha elinye lee-8,99 Euro zeGenius Scan + ezibandakanya zonke izinto zepremiyamu. Ngenye indlela, unokukhetha ukugcinwa kwamafu kweGenius nge-2,99 Euro / inyanga ebandakanya iGenius Scan +.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Ukuskena kweGenius kwi-iPhone kuhlaziywa kusetyenziswa isizukulwana esilandelayo se-AI
I-12x20 Podcast: Umsitho kaMatshi ... Okanye hayi
Izixhobo ze-IOS kungekudala ziya kuba nenqaku elithi "ukhuphelo lwakho" weNetflix